Abavelisi beMeshini yoyilo | I-China yoyilo loyilo lwefektri kunye nabaxhasi
Umnatha wocingo lwentsimbi ubonelela ngesimbo sokuhombisa sale mihla. Xa isetyenziswa njengamakhethini, ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokutshintsha umbala ngokukhanya kwaye inika umbono ongasikelwanga mda.
Intsimbi eyandisiweyo ifakiwe kwiSakhiwo inceda ekunciphiseni imisindo.
Ukwandiswa kwesikrini somboniso unembonakalo entle eneendlela ezintsha zokuhombisa.
Isilingi yentsimbi enetyhefu inomhombiso olungileyo kunye neempawu zokufakwa kwesandi
Intambo ye-Stainless Rope Mesh Wall yoDonga lokunyuka kwezityalo
Intambo yentsimbi engenanto intsimbi udonga oluhlaza ikhuthaza ukukhula okusempilweni kuzo zonke izityalo ezinyukayo njengemidiliya nakweyiphi na indawo, nokuba ziigaraji zokupaka, iivenkile ezinkulu okanye iindlela zedolophu.
Ikhethini ye-Metal Bead-Isahluli esiBalaseleyo seNdawo
Ikhethini yensimbi yentsimbi, ekwabizwa ngokuba ngumkhusane webhola, oqulunqwe ziibhola ezincinci zentsimbi ezixhonyiweyo kumtya okanye kwityathanga, ihlala ithandwa ngakumbi nangakumbi.
Ikhonkco leKeyini eliDibeneyo ligcina izinambuzane ezibhabhayo kude kodwa umoya omtsha kunye nokukhanya ngaphakathi
Ikhethini yeKhonkco leKhonkco-Ukhetho oluGqwesileyo kulwakhiwo lwakho lwangaphakathi lwekhethini yekhethini, ekwabizwa ngokuba yifly screen, yenziwe ngocingo lwealuminiyam ngonyango lomphezulu odongwe. Njengoko sonke sisazi, izinto zealuminium zilula, zinokuphinda zisebenze, zizinze kwaye zinobume obuguqukayo. Oku kuqinisekisa ikhethini yekhonkco lokudibanisa linokumelana nokugqwala kunye neepropathi ezifanelekileyo zokuthintela umlilo. Ikhonkco lekhonkco elihombisayo linika ukhuselo oluthile ukongeza kwiziphumo ezilungileyo zokuhombisa. Ngexesha elifanayo ...
Isithinteli seBelt Belt enemingxunya ilungele ukwakhiwa kweFacade kunye nokuKhonkotha.
Ibhanti yethu yokuhambisa yoyilo ibandakanya ibhanti yocingo yokuhambisa ucingo, ibhanti yokuluka ephindwe kabini, ibhanti elungelelanisiweyo yokuluka kunye nebhanti yokuhambisa ileli.
Architectural ephothiweyo enemingxuma Isetyenziselwa Ukwakhiwa yesamente khazi
Umhombiso wesinyithi wokuhombisa ulukwe kwiipateni ezahlukeneyo, kwaye unezibonelelo zokuba ubhetyebhetye ngokumangalisayo, ulondolozo olusezantsi, ukusebenza kwamandla kunye nokuzinza kwezinto.
I-Metal Coil Drapery yoyilo lwangaphakathi oluSebenzayo kunye nolusebenzayo
I-coil yensimbi yentsimbi inepropathi efanelekileyo engacimi mlilo, ukungena komoya kunye nokuhanjiswa kokukhanya, lolukhetho olufanelekileyo lokuhombisa ngaphakathi nangaphandle.
Isikali Mesh Curtain soKwahlulahlula indawo kunye noYilo lwangaphakathi
Umkhusane womnatha wesikali wenziwe ngemicu edityanisiweyo yamashiti ealuminium, asongwe ngokudibeneyo ecaleni kwaye anemicu emininzi eqhotyoshelweyo okanye elukiweyo.
Icacisa igumbi lakho kunye neOfisi
Ikhethini leChailmail liyinto ebalaseleyo yokuhombisa kwiindawo zokuhlala nezorhwebo. Ubumenyemenye bayo obukhethekileyo bentsimbi kunye nokumenyezela kwenza imeko eyodwa.